Date My Pet » Member Safety no ny Top Priority
Last nohavaozina: Oct. 17 2020 | 2 min namaky
Online fiarovana foana amin'ny lohalaharana ny saintsika, mba te-hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra ataontsika mba mitandrina ny mpikambana azo antoka sy marina aminareo fa izahay manolo ny hanome anareo ny azo antoka indrindra izay azo atao amin'ny aterineto mampiaraka traikefa.
Ity zavatra ataontsika…
Vola amin'ny orinasa-mitarika anti-scammer teknolojia
Scammer teknika dia lasa mandroso kokoa sy miha sarotra ny mamantatra. Fa isika fanaovana izay rehetra vitantsika mba hitandrina azy.
Isika no mampiasa ny teknolojia manohitra ny scammer Scamalytics for 2 taona izao. Mizara ny fitaovana scammer tahirin-kevitra manerana ny aterineto mampiaraka orinasa ary manampy ny ekipa ny voaofana moderatera scammers toerana sy hanala azy ireo avy DateMyPet.com talohan'ny mihitsy aza izy ireo vokany eo amin'ny mpikambana. Scamalytics koa ny Auto-detects scammers ary manala bots, ary koa ny fanomezana ny ekipa miaraka amin'ny 'eo ambany nana' vaovao izay tsy hita maso ny olombelona maso.
Efa voaomana hiady miaraka izany fahalalana, ny mpanjifa ekipa apetraka tsara kokoa ny mamantatra scammer fironana ary manala azy ireo haingana.
Fanofanana mitohy ho an'ny asa fanompoana mpanjifa ekipa
Isika dia iray amin'ireo orinasa ihany no ao amin'ny orinasa miaraka amin'ny ihany in-trano mpanjifa ekipa, miaraka amin'ny fanoloran-tena ho an'ny ekipa fanohanana mpikambana antonony sy ny mpanjifa care. Ny ekipa ny 60 asa 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro, 365 andro isan-taona mba hanome amin'ny andro-potoana fikarakarana amin 'ny mpikambana rehetra manerana izao tontolo izao.
Mino koa isika tsy tapaka sy mitohy mpanjifa mifantoka fiofanana, mikendry ny hanatsara hatrany ny asa, ary hiantohana ny fiarovana ny mpikambana.
Fast fandaminana fotoana
Ny antonony voaofana ekipa lamba mpampiasa rehetra-niteraka afa-po ny nanaiky ny hanamarina ny mombamomba tena. Izany dia midika fandinihana sary, mombamomba, Diary anglisy, lahatsary sy ny hafatra tsy miankina voalohany mba ho azo antoka mpikambana fifanintsanana fepetra dia nihaona ho an'ny tsirairay toerana na tambajotra.
Mba antonony fotoana ambanin'ny indrindra 10 minitra tanjona, ny fahalalana onony ekipa efa mazava hisongadina ny fankatoavana fotoana mba hahafahany manara-maso ny zava-bitany nandritra ny fanovana. Fotoana antonony amin'izao fotoana izao amin'ny mahavariana 7.5 minitra!
Dating mpanazatra manolotra fanohanana sy torohevitra
Ary koa ny fanomezana fikarakarana avo lenta mpanjifa rehetra ny mpampiasa, ny ekipa ihany koa ny manao toy ny mampiaraka mpanazatra, manampy ny mpikambana, izay miady mafy amin'ny lafiny ara-teknika, na izay tsy za-draharaha an-tserasera daters handray soa faran'izay betsaka avy ny mampiaraka traikefa.
Ny mpanjifa ekipa care manome torohevitra momba ny fomba mamorona profil izay hanatanterahany vokatra tsara, ny fomba hijanona soa aman-tsara, ary inona no hitranga rehefa mampiaraka an-tserasera.
Can Pet Allergies sy hiara-hitoetra Dating?
Nahita A Pet Sitter
5 Ve ny sy Don'ts ny mahomby Online Dating